Rosiana mpanao gazety maty nisy namono tao amin’ny Repoblikan’i Afrika Afovoany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2018 4:53 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, English, Swahili, Deutsch, Français, polski, عربي, Italiano, Nederlands, English
Orkhan Dzhemal, 51 taona, mpanangom-baovaon'ady menavazana avy any Rosia, maty tamin'ny 31 jolay 2018, tao amin'ny Repoblikan'i Afrika Afovoany // Pikasary avy amin'ny Akon'i Moskoa, YouTube
Rosiana mpanao gazety miisa telo no maty nandritra ny alin'ny 30 jolay tao amin'ny Repoblikan'i Afrika Afovoany, teo amin'ny toeram-pisavana iray ivelan'i Bangui renivohitra.
Notifirin'olon-tsy fantatra izay nivoaka avy any amin'ny akata ankilan'ny arabe teo am-pahatongavany ny mpanangom-baovao menavazana Orkhan Dzhemal, ny mpanatontosa sarimihetsika Aleksandr Rastorguev efa nahazo loka tamin'izany ary ny mpaka lahatsary Kirill Radchenko.
Nitranga tao anatin'ny fifandonana misy eo amin'ny governemantan'ny firenena sy ireo vondrona mpioko isan-karazany izao fanafihana izao.
Nohamafisin'ny Foibe Fanarahamaso Famotorana (TsUR, Tsentr Upravleniya Rassledovaniyami) izao fahafatesana izao, sehatra iray itaterana famotorana natsangan'i Mikhail Khodorkovsky, mpanankaremben'ny solika teo aloha izay miaina an-tsesitany any Londra amin'izao fotoana izao.
Araka ny The Moscow Times, nanolotra fitaovam-piadiana sy nampandefa ekipa mpanao fanazarana hanampiana ny mpitandro ny filaminan'ny Repoblikan'i Afrika Afovoany i Rosia.
Araka ny TsUR, amin'izay asa nampanaovina an'i Dzhemal, Rastorguev ary Radchenko tany amin'ity Repoblika ity, manohy amin'ny fanarahana zava-baovao hitany momba ireo Rosiana mpikarama an'ady mitao fiadiana tsikaritra tany amin'ity firenena Afrikana ity ny mpanao gazety.
Tsy mbola nankatoavina tamin'ny fomba ofisialy mihitsy ny fisian'ity vondrona mitam-piadiana ity, na dia notondroin'ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety maro aza ny fisian'ny ‘Wagner Group’ any amin'ireo toerana mafampana toy ny any Syria sy Okraina Atsinanana. Na dia tsy mitsahatra ny mitsipaka ny honohona izy dia betsaka ireo mino fa i Evgeny Prigozhin, mpandraharaha matanjaka manana fifandraisana akaiky amin'i Vladimir Potinina, sady nosazian‘i Etazonia noho ny filazana fa tafiditra amin'ny raharaha nanafintohina tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena (Etazonia) tamin'ny taona 2016 — ary mbola tsy niaiky ny amin'izany mihitsy izy — no nanangana ity ‘Wagner Group’ ity.
Hajaina tokoa ao amin'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao matihanina ry Dzhemal, Rastorguev ary Radchenko ireto. Mpanangom-baovaon'ady manan-daza tokoa i Orkhan Dzhemal, efa hatrany amin'ny fanombohan'ny taona nisian'ny gazety miahy tena tao Rosia izy no nanomboka ny asany. Nankalazaina tamin'ny fitantarany tsy mitsahatra momba ny fitroaran'ny mpanohitra an'i Potinina tsy nahomby tao Rosia i Alexander Rastorguev tamin'ny lahatsary fanadihadiana navoakany tamin'ny taona 2013 mitondra ny lohateny hoe “Ny Teny” (Srok). Niasa amin'ny maha-mpanangom-baovao TV azy tany amin'ny faritra misy ady tahaka ny tany Syria i Kirill Radchenko.